Na-eweli mgbochi na njem mba ụwa na USA gbara ume
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Na-eweli mgbochi na njem mba ụwa na USA gbara ume
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ okomoko • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Ndị otu ụlọ ọrụ na-agba mbọ bulie mmachi na njem mba ụwa na United States
Maka izu ọ bụla mmachi njem ahụ ka dị, akụnụba US na -efufu ijeri $ 1.5 na mmefu naanị site na Canada, European Union, na UK - ego zuru ezu iji kwado ọrụ ndị America 10,000.
Mkpuchi mbata idobere maka naanị mba nwere ihe egwu.
Dochie ihe mgbochi ndị ọzọ na-eme njem na blanketị na usoro nke usoro ntinye dabere na nyocha obodo n'ihe gbasara njem obodo na obodo.
Gbaa mbọ hụ na okirikiri ahụ dị mfe nghọta, nkwukọrịta, na itinye ya n'ọrụ.
Njikọ nke otu azụmaahịa 24 na -anọchite anya nnukwu akụ na ụba US na -emegharị oku ngwa ngwa iji bulie mmachi na nleta mba ụwa na United States, na Wenezde wepụtara ụkpụrụ amụma maka ịmalitegharị ókèala n'enweghị nsogbu.
Akpọrọ "Ntọala maka mmachibido mbata nnabata na ịmalitegharị njem mba ofesi," akwụkwọ ahụ na -akọwa ụkpụrụ amụma maka ịnabata ndị ọbịa mba ofesi na United States ma na -edebe ahụike na nchekwa dịka ihe kacha mkpa.
"Industrylọ ọrụ njem na -ekwenye na sayensị na -eduzi bụ ụzọ ziri ezi, sayensị na -agwakwa anyị ruo oge ụfọdụ na ọ ga -ekwe omume ịmalite ịmalitegharị njem mba ofesi n'enweghị nsogbu," Traveltù Na-ahụ Maka Njem US Onye isi ala na onye isi ala Roger Dow. “Akwụkwọ anyị na -aga n'ihu na -ebute ụzọ nchekwa ka anyị na -enye ụzọ maka idozi ọtụtụ ijeri dollar na mbibi akụ na ụba n'ihi mmachi na -aga n'ihu na -agafe ókèala anyị, ọkachasị site na mba ndị jikọrọ ọnụ nwere ụdị ịgba ọgwụ mgbochi yiri nke ahụ. Anyị nwere ihe ọmụma na ngwaọrụ anyị kwesịrị ịmalitegharị njem mba ofesi n'enweghị nsogbu, ọ bụ oge gara aga ka anyị na -eji ha. ”
“Ndị ụgbọ elu US abụwo-ma na-aga n'ihu na-abụ ndị na-akwado nke ọma maka ụzọ dabere n'ihe ize ndụ, nke data na-ebute iji maliteghachi njem mba ofesi dị ka akọwara n'akwụkwọ ntuziaka,” ka ụgbọ elu maka Onye isi ala America na onye isi oche Nicholas E. Calio kwuru. “Anyị dabere na sayensị n'oge nsogbu a niile, nyocha na -ekpebikwa mgbe niile na ihe ize ndụ nke nnyefe n'ụgbọ elu dị ala. N'ezie, Harvard Aviation Public Health Initiative kwubiri na ịnọ n'ụgbọ elu dị mma ma ọ bụrụ na ọ nweghị nchekwa karịa ihe a na -eme kwa ụbọchị dị ka iri nri n'ụlọ nri ma ọ bụ ịga ụlọ ahịa. Sayensị doro anya-ọ bụ oge, ma ọ bụrụ na ọ bụghị oge gara aga, ka gọọmentị US mee ihe ma mepee njem n'etiti US na mba ndị nwere obere nsogbu. ”